Booliska Soomaaliya oo shaaciyay khasaaraha ka dhashay qaraxa - Awdinle Online
Home News Booliska Soomaaliya oo shaaciyay khasaaraha ka dhashay qaraxa
Booliska Soomaaliya oo shaaciyay khasaaraha ka dhashay qaraxa
Afhayeenka Ciidamada Booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan ( Duudishe) ayaa sheegay in qaraxa ka dhacay agagaarka Ex-koontorool Afgooye uu ahaa mid loo adeegsaday ruux isku soo xiray waxyaabaha qarxa.
Afhayeenka oo Warhaabinta kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay in Goobta la qarxiyay ay aheyd meel mashquul badan, balse ay qaraxa ku dhinteen laba ruux oo uu kujro ismiidaamiyihii iyo Haweeney Shacab ah.
Waxaa uu hadalkiisa intaasi ku daray in 28 ruu oo kale oo Shacab ahaa ay qaraxaasi ku dhaawacmeen, isla markaana hay’adaha Amniga dowladda Soomaaliya ay wadaan baaritaan dheeraad ah oo la xiriira qaraxa.
Ilaa iyo hadda majirto cid sheegatay mas’uuliyada qaraxa ay ku waxyeeloobeen dadka Shacabka ah e ka dhacay agagaarka Ex-koontorool Afgooye ee Magaalada Muqdisho.
Previous articleDeni oo sheegay inay jiraan dad diidan horumarka Puntland
Next articleGalmudug oo Wafdi u dirtay degaan lagu dagaalamay